Sheekada halgamaagii dhul gabaahiir ah u rogay keyn qurux badan! | Radio Himilo
Home / Deegaan / Sheekada halgamaagii dhul gabaahiir ah u rogay keyn qurux badan!
Posted by: Mahad Mohamed 12 days ago
Himilo – Sebastião Ribeiro Salgado, waa sawir-qaade hore iyo suxufi reer Brazil ah, hayeeshe in yar ayaa og inuu sidoo kale yahay maskaxdii ka danbeysay mid kamid ah mashaariicdii dhir-beeris ee lagu liibaanay taariikhda casriga ah. Si mid ah isaga iyo afadiisa, Salgado waxay ku guuleysteen inay beeraan malyuun geedo ah muddo 20 sanno ka badan.
Qisada Instituto Terra, oo ah naadi aan faa’iido doon aheyn kaas oo ay isla heleen Salgado iyo afadiisa, Leila Wanick wuxuu shaqo billaabay sannadkii 1998-kii.
Salgado wuxuu kusoo koray agagaaraha keynta Atlantic-ga. Wuxuuna xusuustaa yaraantiisii in halkan ay aheyd meel dhir badan oo nooluhu ku kulmaan, balse markii uu kusoo laabanayay bartimihii 90-meeyada, muuqaalkaas uma muuqan.
“Dhulku wuu bukay. Wax walbana waa la burburiyay,” Salgado ayaa u sheegay The Guardian. “Keliya 0.5% ayaa ka aheyd dhir.”
Sida beeraleyda kale, Salgado aabihiis wuxuu jari jiray dhirta adag si ay alwaax uga suubsadaan; waxayna beeri jireen geedaha Afrikaanka si ay xoolaha u daaqsadaan. Salgado markii uu arkay xaalku siduu yahay, marnaba kama niyad-jebin. Wuxuu, isaga oo kaashanaya afadiisa, ku tala-galay inuu sideedii hore kusoo celiyo.
“Kaddib markii aan billownay mashruuca, dhirtii oo dhan ayaa soo dhalatay; waxaana soo laabtay noolihii ku noolaa. Waqtigaas aniga xittaa dib ayaa u dhashay. Wuxuuna ahaa midkii iigu farxadda badnaaa noloshayda.”
Wuxuu ilaa xad ku dadaalay in keynta lagu soo celiyo dabeecadda asliga ah, si loogu guuleysto hanashada derisnimadii kala dhaxeysay noolihii ku dhex noolaa waagii hore.
“Sida inaad korinayso ilmo,” ayuu yiri Salgado. “Waxaad u baahan tahay inaad barto sida loo socdo; loo hadlo si ay hadhow ula xiriiraan dunida kale. Geeduhuna waa lamid. Waxaad u baahan tahay inaad siiso daryeel dhab ah.”
Balse guusha halgankiisa waxaa kaga baxay wax badan. Xittaa adduunkii uu keyd ahaan u heystay. Maadaama deeqda uu ka helo dowladda iyo hey’adaha samafalka aanay marwalba laheyn damaanad sugan, Salgado wuxuu ogsoonaa inuu haddana huri doonin inay usoo dhici doonto jeebkiisa si loo sii joogteeyo mashruuca.
Mar waxaa jirtay uu iska iibiyay kaamirada uu lahaa oo lagu qiyaasay inay ku kacaysay adduun dhan $107,000 taas oo u suura-gelisay inuu ku beero geedo ka badan 30,000.
Previous: Dortmund oo rumeysan in aan laga soo bixi Karin dalabka lacageed ee Sancho
Next: Juventus oo Man United kula tartameysa khad dhexe katirsan Valencia